HGH လိမ်လည်သူများကို - တစ်ဦးကလိမ်လည်မှုနှိပ်စက်ခံရသူဖြစ်လာခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက မတ်လ 22, 2018
လိမ်လည်မှုက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့် function ကို
"အမြန်" ကိုဖန်ဆင်းက်ဘ်ဆိုက်များ - ဆိုဒ်များ၏ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပညာရှင်ပီသစွာလုပ်သည်တဦးတည်းစာမျက်နှာရှိပါတယ်, ဆိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ သူတို့သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းတို့၏ site ကိုလျင်မြန်စွာအသစ်တစ်ခု site ကိုအောင်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်နားလည်သောကွောငျ့လိမ်လည်သူများကို, ဒီဇိုင်းနှင့်တစ်ရက်ဆိုဒ်များစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့
အဘယ်သူမျှမ site ပေါ်တွင်ဖုန်းနံပါတ်, တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံများသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုဘယ်သူမှအဖြေကိုအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ လိမ်လည်သူများကို၎င်းတို့၏ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြသ (သို့မဟုတ်အခြားသူများအားပြသ) ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဖြေကြဘူးပါဘူး
လိမ်လည်သူများကိုမကြာခဏသာအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုအသုံးပြုပါ။ လိမ်လည်သူများကိုထိုကဲ့သို့သောသင်ပေးချေမှုရရှိသူ၏နာမကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာဘဏ်လွှဲပြောင်းငွေသားအားဖြင့်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်ဥပဒေရေးရာအော့ဖ်လိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ, အသုံးမပြု
လိမ်လည်သူများကိုအမြန်ချောပို့နှင့်ငွေသားပေးချေမှုကိုမသုံးကြဘူး - ကြောင့်ကုန်စည်မရှိခြင်း
site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏လိပ်စာရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ Google Maps ကို
ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ , ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ , ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒကို
ချစ်ခင်ရပါသောဘော့ကျနော်တို့ဘန်ကောက်မြို့အမြန်ချောပို့နှင့်ငွေသားပေးချေမှုများကိုရှိသည်, သငျသညျ, ထိုသေတ္တာများဖွင့်လှစ် QR codes တွေကိုစစ်ဆေးသေချာအောင်ဘို့ဘာမှနိုင်ပါတယ်
ဇန်နဝါရီ စက်တင်ဘာလ 19, 2018
သငျသညျ Pfizer ကနေစစ်မှန်တဲ့ဥရောပ genotropin ရောင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုသေချာဖြစ်ဖို့ကိုဘယ်လို ??? သို့မဟုတ်မထိုင်းနိုင်ငံတွင်ယူဂိုဆလားဗီးယားတစ်ခုခု?
Bob စက်တင်ဘာလ 19, 2018